Barasaabka Kirinyaga oo wax laga weydiinaya fadeexadii NYS | Star FM
Home Wararka Kenya Barasaabka Kirinyaga oo wax laga weydiinaya fadeexadii NYS
Barasaabka Kirinyaga oo wax laga weydiinaya fadeexadii NYS
Waaxda dacwad soo oogidda dalka ayaa sheegtay in guddoomiyaha ismaamulka Kirinyaga ee gobolka bartamaha dalka Anne Waiguru ay faahfaahin doonto waxyaabaha ay ka ogtahay fadeexad horay u saameysay waaxda qaran ee adeegga dhallinyarada ee NYS.
Waxay ku marqaati furi doontaa xoghayihii hore ee wasaaradda dowlad wadaajinta iyo qorsheynta Peter Mangiti iyo madaxii hore ee NYS Nelson Githinji.
Waiguru ayaa ka mid ah marqaatida waaxda dacwad soo oogidda oo baaritaano ku haysay lunsashada in ka badan 791 milyan oo shilin oo sanado ka hor laga musuqmaasuqa waaxda qaran ee adeegga dhallinyarada.
Mrs. Waiguru ayaa horay u soo noqotay wasiiradda dowlad wadaajinta.
Previous articleKuwait oo gargaar u diraysa Qaza
Next articleIndia oo ay COVID19 ugu dhinteen in ka badan 4,500 qof oo dheeraad ah